admin – Somali Sounds
Muxuu ahaa shirka uu furay Wasiirka Arimaha Gudaha?
Wasiirka Arimaha Gudaha ee Somalia Abdi Mohamed Sabriye ayaa maanta ka furay shir magaalada Muqdisho. Shirka waxaa looga hadlay sidii gargaar lagu gaarsiin lahaa deegaanada laga saaray kooxda Al shabaab. Shirkaan oo eey ka soo qeyb galeen hogaamiyaal iyo hay’ado shisheeye oo taageera Soomaaliya. Muhiimada shirkaan ayaa ahayd in dowladda Somaaliya laga taageero sidii loo […]
Gudoomiyaha baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo u yeeray Wasiirada Gaashaandhiga, Amninga, iyo taliyayaasha Xooga Dalka, iyo Booliska.
Qalalaasaha kusoo batay Gobolka Banaadir maalmihii ina soo dhaafay ayaa keenay in golaha Baarlamaanka uu u yeero saraakiisha ugu sarraysa laamaha ammaanka ee dowladda Federaalka. War rasmi ah oo kasoo baxay guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Federaalka ayaa loogu yeeray wasiirrada ammaanka,Gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada Meleteriga iyo kuwa Booliska, iyadoo wax laga weydiin doono dhibaatooyinka xasilooni darada […]
Casharka Tafsiirka Qur’aanka Kariimka eh Sheikh Abdulkadir kishki
SHEEKO GAABAN: Dabagale (Stalker)
April 3, 2019 April 4, 2019 adminComment(0)
Qeybta 1-aad: Waxeey dhameysay shaqadeedii maalmeed, waana xiligii ay rawixi lahayd, laakiin Suuban waxeey go’aansatay in ay sugto saaxiibteed Trudy oo ay Isla raacaan tareenka si ay xaafadahooda oo isku dhow u aadan. Waa wax ka dhaxeeyo, labadooda in midiba tan kale sugto haddii ay shaqada ka hor dhameyso, ka dibna marmar waxeyba isla sii […]
Ciidamada Booliska oo noqday Cabsi geliyaha Shacabka.
General Zakia oo ah Taliye ku xigeenka ciidanka Booliska ayaa shir jaraa’id kusoo bandhigtay sawir gaari oo ay ku sheegtay inuu yahay mid qarax laga soo buuxiyay uguna baaqday shacabka inay ka feejignaadaan. Gaariga ay soo bandhigtay sawirkiisa ayaa la helay inuu yahay gaari IIB u yaal ah dalka Jabaan, taasi oo khatar gelineysa run […]
Weerar Miino ah oo lagu qaaday Ciidamada Itoobiya ee ku Sugan gobolka Bay.
Gobolka Bay ayaa naga soo gaaraya warar sheegaya in duleedka degmada Bardaale qarax miino dhulka lagu aasay lala beegsaday ciidamo Itoobiyaan ah, kuwaasi oo lasheegay inay lugaynayeen. Dadka deegaanka oo aan ka helnay warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in weerarkaasi uu dhaliyay khasaaro soo gaaray ciidamadaasi, inkastoo warku aanu sheegin baaxada ay la egtahay […]
Digniino hor leh oo kasoo baxay booliska iyo Cabsi kajirta Muqdisho .
Taliye ku xigeenka ciidanka Booliska Gen Zakia ayaa sheegtay in Magaalada Muqisho uu ku jiro gaari nuuciisu yahay Barado , laguna soo raray waxyaabaha qarxa sidaas darteed shacabka looga baahanyahay in ay feel jignaadaan. Waxeey Taliyaha Fartay in la yareeyo Scodka Dadkana ay meelaha Leeyskugu tago Buuxiyaan. Cabsi iyo khataro amni oo baaxad leh ayaa […]
Duqa muqdisho oo si kulal ugu hadaly Arin ka dhacday Isbitaal Muqdisha Ku yalaa ( Maxeey Aheeyd arinta?
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Muqdisho Eng Abdirahman Omar osman Ayaa si adag u cabaareeyay Arin ay ku dhaaqaaqeen maamulka Isbitaalka . Duqa magaalada ayaa carabka ku adkeeyay in ay tahay arin laga xumaado in Bukaan xaladaas ku jira Sidaas loola dhaqmo waxuuna Sheegay in Gabdha Gacanta lagu haayo. Dhanka kale Maamulka Isbitaalka Wardi […]
DIIGNIIN MUQDISHO :- Taliska Booliska JFS Oo Shacabka ugu Baaqay ineey Foojignaadaan. (SABAB ?)
Digniin Amni . Taliye ku xigeenka ciidanka Booliska Gen Zakia ayaa sheegtay in Magaalada Muqisho uu ku jiro gaari nuuciisu yahay Barado , laguna soo raray waxyaabaha qarxa sidaas darteed shacabka looga baahanyahay in ay feel jignaadaan. Koontroolada magaalada waxaa lagu arkayaa ciidama dheeri ah Cabsi Xoogan ayaana ka jirta caasimada guud ahaa Waxii kuso […]
Xildhibaano ku Goodiyay Ineey Baarlamaanka Isaga baxayaan ! Sabab ?
Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ayaa cabasho ka keenay arrimaha Dastuurka oo weli howshiisa socoto, kaasoo maanta lagu soo bandhigay fadhigii Baarlamaanka, isagoo dalbaday in loo caddeeyo in Dastuurka yahay mid Soomaaliyeed ama mid ku eg Koofurta Soomaaliya. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in Xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland […]